Ogaden News Agency (ONA) – Mudane Maxamed Rashiid oo Maanta Kadhoofay S.africa.
Mudane Maxamed Rashiid oo Maanta Kadhoofay S.africa.
Posted by Dulmane	/ May 25, 2016
Waxaa maanta oo Arbaco ah wadanka S.africa ka amba baxay kuxigeenka hogaanka Abaabulka iyo arimaha Jaaliyadaha JWXO mudane maxamad Rashiid Sh Cabdulaahi oo mudooyinkii ugu dambeeyay kusugnaa wadanka S.africa. Mudane Maxamed Rashiid ayaa 1 / 4 / 16 kasoo caga dhigtay Gagida diyaradaha ee Oritomo Airport ee magaalada Johannesburg ee wadanka S.africa.
Halgame Maxamad Rashiid oo ah rugcadaa katirsan golaha dhexe ee JWXO ahna xubin katirsan gudiga Fulinta ONLF ayaa Socdaal howleed kutagay wadanka South Africa wuxuuna socdaalkiisa kutagay dhamaan gobolada iyo dagmooyinka wadanka.
Hogaanka ayaa mudadii dheerayd ee shaqada uu kujiray lakulmay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada Ogadenia sida maamulada faracyada, Ururka OYSU, Ururka Haweenka Ogadeniya, Odayaasha dhaqanka Ogadenia iyo guud ahaan jaaliyada S.ogadenia ee wadanka koonfur Afrika.
Sidoo kale hogaanka ayaa lakulmay jaaliyada soomaali wayn ee kudhaqan wadanka S.africa wuxuuna siqoto dheer jaaliyada Soomaaliyeed ugu sharaxay qadiyada Ogadenia iyo waliba damaca gumaysiga ee geeska Africa.
Sidoo kale mudane Maxamed Rashiid ayaa siminaaro dhaxal gal ah u qabtay hogaanka iyo xubnaha Jaaliyada S.ogadenia Ee S.africa JOKA wuxuuna sidoo kale hogaanku socdaalkiisa xooga kusaaray dhinaca Abaabulka iyo kicinta bulshada.
Jaaliyada Ogadenia ee K.afrika JOKA ayaa si mug iyo miisaan leh usoo dhawaysay socdaalka Hogaan xigeenka Arimaha Abaabulka iyo Jaaliyaddaha waxayna kutilmaameen Socdaal taariikhi ah oo ayna iloobi doonin.
Mudane Maxamed Rashiid oo mudo kusugnaa wadanka S.africa ayaa maanta si nabad ah uga dhoofay wadanka S.africa isagoo ku faraxsan safarkiisii mudada qaatay oo guul ugu dhamaaday.
Halgame Maxamad Rashiid waxaa Garoonka Dayuuradaha kusii sagootiyay qaar kamid ah masuuliyiinta jaaliyada Ogadenia ee South Africa oo uu hor kacayay Halgame Faysal Naftii Gade oo ah Gudoomiyaha Jaaliyadda JOKA ee wadanka S.africa waxayna hogaanka usagootiyeen si heer sare ah.